ISki Goggles Helix Imnyama / Blue - ULLER
Helix Okumnyama / Oluhlaza okwesibhakabhaka
Kuthengiswe 225.00 €
Izigodi ze-Ski nge Amalensi ezinhlamvu angaguquguqukayo Kufakwe amalensi ama-2: I-1 yezinsuku ezinelanga ku-CAT.3 kanti enye ilula ngezinsuku eziphansi zokubonakala ku-CAT.1. Ama-lens ayo kazibuthe akuvumela ukuthi uguqulwe ngokushesha futhi kube lula ngamalensi ngaphansi kwemizuzwana emi-2.
Kuhlanganiswe amalensi ama-2: 1 ngelanga nelilodwa lokubonakala okuphansi
Icala lokuthwala kanzima
IZINHLOBO ZESI-MAGNETIC ZESIHLOKO
Le modeli yemaski ifaka uhlelo lokushintshana kwamalensi. Uhlelo oluvumela ukuthi ushintshe ngokushesha futhi kalula amalensi nganoma yisiphi isikhathi, kuya ngesimo sezulu.
Ngenxa yemagnethi anayo, ukufaka i-lens ohlakeni kwenziwa kalula, ukukwazi ukuguqula ilensi ngemizuzwana emi-2 kuphela.
Ebhokisini sifaka amalensi ama-2 ahlukene:
Isigaba 3 ilensi eyinhloko, ilungele izinsuku ezinelanga
Isigaba 1 ilensi yesibili yezinsuku zokubonakala okuphansi nezimo ezingezinhle.